Mbudzi 19, 2017 arun kunyoresa, kombiyuta, mutyairi, OSGEAR Support, Products, chengetedzo 0
Blu-ray Disc (chidimbu BD) mumwe inotevera chizvarwa Disc zvinogona pashure DVD kuchengetera yepamusoro mavhidhiyo uye mukuru-kukwanisa Data. Blu-ray Disc chinhu rinotevera-chizvarwa Disc Specification akaronga neDare Blu-ray Disc Association, iro rinoumbwa Sony uye Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., uye Sony akatungamirira nzwisisika kusimudzira chokuita zvinogadzirwa munyika 2006. Blu-ray discs vanonzi kuti kuverenga uye kunyora vachishandisa rebhuruu Laser danda ari wavelength pamusoro 405 nanometers (munhu 650 nanometer wavelength muverengi Red maDVD uye 780 nanometer wavelength michini kuti maCD). Heino boka kwazvo nyanzvi Blu-ray playback unopfuta Software vose kugoverana.
More Recommended Software kushanya pazasi ~~~
Reverero Mac Os
Hot Bayirai ~ ~ ~
Slot mu Type
Ndapota shandisa uye kutsigira Software yepakutanga
Leawo anoita sezvo vakasununguka Blu-ray Disc mutambi, vakasununguka DVD Disc mutambi, vakasununguka 4K HD Video, vakasununguka ISO faira mutambi, uye vakasununguka Audio mutambi. Kuva akasununguka Blu-ray Disc mutambi Software Anwendung, izvozvo anotamba Blu-ray discs kuti vanotombozvidya, uye pasi inowirirana DVD discs playback, zvisinei vari vezvokutengeserana kana nguva dzose. Ndicho yakanakisisa akasununguka Software atambe Blu-ray musi Windows (kusanganisira Windows Vista, XP, 7, 7, 8, 8.1, uye 10).
PowerDVD pamu akasiyana firimu, music and photo features indispensable for creating an unbeatably immersive sight & ruzha ruzivo. Uye kuti vanhu vachitsvaka kusika munhu mabhaisikopo vanonzwa mudzimba dzavo, PowerDVD zvino ane nyika-kutanga zvigadzirwa kuchikosha kuti maximize dzingangoitika wako 4K uye HDR TVs!
Macgo Blu-Ray mutambi
Standard Versiom - The best Blu-ray mutambi software that supports BD, ISO mafaira uye BDMV folders zvinoshamisa Hardware kumhanyisa - BluFast MX.
Pro Version - Support hwenguva dzaishandiswa Blu-ray Muterere Zvokuvandudza yepakutanga Audio unhu Inoenderana multiple nevezvenhau zvinogona
Uya Hollywood pamba aitungamirira Video playback, Blu-ray uye DVD Software, Corel® WinDVD® Pro. Kubva mukuru-chisarudzo 4K mavhidhiyo uye HEVC (H.265 *), kuna 3D Video, MaDVD uye Blu-ray, vane hombe-siyana zvinogona chete dzinokatyamadza unhu, Dolby inzwi uye zvakawanda. Nzwisisa anotonga ari yoku-, inowanikwa ano regai iwe nyore yakanaka-chuna mavhidhiyo uye Audio. Plus, nakidzwa unotedza playback mutsva 240 the waivako.
AnyMP4 Blu-Ray mutambi
Play chero Blu-ray Disc / forodha / ISO mufananidzo faira, 4K Video uye 1080p HD vhidhiyo mukuru tsanangudzo mufananidzo uye kugonesesa Video unhu.
Blu-ray Toolkit zvose-in-imwe Blu-ray Software, izvo unotora Blu-ray Player, Blu-ray Ripper, uye Blu-ray Kopa Platinum Software. With ichi simba uye ichiita mabasa akawanda Blu-ray Toolkit, vanokwanisa kubata chero Blu-ray nyaya nyore uye vanakidzwe inoshamisa Blu-ray ruzivo.
A simba mutambi anogona kuridza Blu-ray Disc, Blu-ray forodha, DVD Disc / forodha / ISO faira uye zvakajairika vezvenhau mafaira uye mavhidhiyo zvakanaka. Uchikwanisa kuridza chero Blu-ray Disc zvakananga 1080p HD kuona kushanda uye kutamba H.265 / HEVC yeEncoding 4K mavhidhiyo mafaira losslessly pamusoro PC. Chii chimwe, ichi Aiseesoft Blu-ray Player uyewo anoita nevakawanda nevezvenhau mutambi upi HD / SD mavhidhiyo mafaira uye uchikwanisa kunakidzwa immersive Audio nomugumisiro.
Wana zvimwe Blu-Ray Support uye zvigadzirwa ~ Click pano
CPU mudziyo Model Nokia Technology mudziyo maneja Samsung processors HD Graphics Processor Software Series Driver Support mutyairi rutsigiro Public Purpose 64-ikakuruma Windows Intel HTC Nharembozha pamutemo dudziro Technology_Internet Os-Store
Samsung Galaxy Series Driver Support pamutemo dudziro Nokia Nharembozha HTC processors Public Purpose mudziyo Model mudziyo maneja smartphones mutyairi rutsigiro Intel Server Processor HD Graphics Technology Samsung Intel 64-ikakuruma Windows Qualcomm Software CPU Technology_Internet Sony Ericsson Os-Store